ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာ ဆု ရတယ်ဆိုတဲ့ နို့ဘီလူးဇတ်ကား ဂျင်းထည့်ခံရတာလား – Shwe Thoon 8 Online Media
နို့ဘီလူးက နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာ ဆု ရတယ်ဆိုတော့ မျက်လုံးတွေဘာတွေ ပြူးသွားတယ် ။ ဆုရတဲ့ထဲမှာ လူမင်းက သရုပ်ဆောင်ဆု နဲ့ ဒါရိုက်တာဆုပါရသေး ဆိုတော့ ပိုအံ့သြ ၊ ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲပေါ့ ၊ ငါသိတဲ့ လူမင်း သရုပ်ဆောင်ပုံက ‘ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် Pro Max ‘ ပါပေါ့ ၊ သူနဲ့ ဘစိုင်း ၂ ယောက်ပဲပြိုင်လို့ သူ ဆုရသွားတာများလားပေါ့ ?
အဲ့ဒါနဲ့ နို့ဘီလူးဇာတ်ကားက ဆုတွေရသွားတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ဆိုတာတွေအကြောင်း လိုက်ဖတ်မိတယ် ။ ပထမဆုံး တစ်ခုက Calcutta International Cult Film Festival ဆိုတာ ၊ နိုင်ငံတကာမှာ အတော်တော့ သြဇာကြီးတဲ့ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပဲနေမယ် ၊ ဘယ်လောက်တောင် ထင်ရှားသလဲဆို Wikipedia မှာတောင် ရှာမရဘူး ၊
အဲ့ဒါနဲ့ သူတို့ website မှာ သွားဖတ်ရတယ် ။ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရဲ့ သက်တမ်းက ၅ နှစ်ရှိပြီ ( များသောအားဖြင့် သက်တမ်းရင့် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေက သြဇာကြီးကြတာ များပါတယ် ၊ အဲ့ဒါကြောင့် သက်တမ်းကိုပါ ကြည့်ရတာပါ ၊ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေထဲမှာ Cannes, Venice နဲ့ Berlin ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေဟာ ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ ကြီး ၃ ကြီးအဖြစ် ထင်ရှားပါတယ် ။ သူတို့ ၃ ခုလုံးမှာ တူညီတဲ့အချက်က သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ရုပ်ရှင်ပွဲတော် စာရင်းဝင်တွေ ဖြစ်တာပါပဲ ။ )
သူတို့ website ရဲ့ အဆိုအရတော့ Calcutta International Cult Film Festival မှာ တစ်လကို ရုပ်ရှင်ကား ၅၀ လောက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြပြီးတော့ အဲ့ထဲကနေ လစဉ် ဆုရရှိသူ ဇာတ်ကားတွေကို ရွေးတယ်ပေါ့လေ ၊ ပြီးရင် လစဉ် ဆုရတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို ပြန်ပြိုင်စေပြီးတော့ နှစ်စဉ်ဆုရတဲ့ ကားတွေကို ပြန်ရွေးတယ်ပေါ့ ။ ဒီအထိကတော့ အိုကေပဲ
၊ ဒါပေမယ့် ပွဲတော်ရဲ့ စည်းကမ်းတွေ ဖတ်ကြည့်မှ ဟာသတွေ တွေ့ရတာပဲ ။ တစ်လကို ဇာတ်ကား ၅၀ လောက်ပြိုင်ကြတဲ့ ပွဲမှာ ပေးတဲ့ဆု အမျိုးအစားက ၅၀ ကျော်နေတယ် ? ဆိုတော့ကာ သင်္ချာနည်းနဲ့ တွက်ရင်တောင် ဝင်ပြိုင်သူတိုင်း ဆုရဖို့ သေချာနေတဲ့ ပွဲပါ ။ ဒါ့အပြင် ပထမတစ်ခါ ဝင်ပြိုင်လို့ ဆုမရရင် နောက်လမှာ ပြန်ပြိုင်လို့ ရသေးတယ်ဆိုပဲ
( ဆုမရမချင်း ပြိုင်လို့ရတာပေါ့နော် ၊ ဗဲရီးဂွတ် ) ၊ ဘာလို့ အဲ့လောက်ထိ သဘောကောင်းနေရသလဲ လို့လိုက်ကြည့်တဲ့အခါ ဝင်ပြိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေက ဝင်ကြေးပေးပြီး ဝင်ပြိုင်ရတာဗျ ၊ အဲ့ဒီတော့ သူတို့က ပြိုင်လေ ဝင်ကြေးရလေကိုး ၊ ပေးပြိုင်တာပေါ့ ၊ တကယ်တော့ ဝင်ကြေးယူပြီး ဆုရောင်းစားတဲ့ သဘောပါပဲ ၊ ဒါကြောင့်လဲ ‘ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် Pro Max ‘ ကြီးက သရုပ်ဆောင် ဆုပါ ရသွားတာကိုး ?
နို့ဘီလူး ဇာတ်ကားက ဆုရသွားတဲ့ ဒုတိယ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကတော့ Druk International Film Festival ဖြစ်ပါတယ် ။ သူကလဲ ခုနက ရုပ်ရှင်ပွဲတော်လိုပါပဲ ။ Wikipedia မှာ ရှာလို့ မရယုံတင်မကပဲ သူတို့ ပွဲတော်ရဲ့ website ကို ဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ( ပိုဆိုးတာက ဒင်းတို့က ကိုယ်ပိုင် website တောင် မရှိပါဘူး ၊ သူတို့ website ကို ဝင်ကြည့်တဲ့အခါ
account suspended ဆိုတာပဲ ပေါ်နေပြီးဘာ webpage မှ မတွေ့ရပါ ၊ film freeway ဆိုတဲ့ website မှာမှ သူတို့အကြောင်း သွားဖတ်ရပါတယ် ) ခုနကအတိုင်းပဲ ဘာအစဉ်အလာမှမရှိပဲ လစဉ်ပြိုင်ပွဲ လုပ်တဲ့အပြင် ဝင်ပြိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားအရေအတွက်ထက် ပေးတဲ့ ဆုအရေအတွက်က ပိုများနေရုံမက ဆုမရမချင်း ဝင်ပြိုင်လို့ ရတာရော ၊ ဝင်ကြေးပေးပြီး ပြိုင်ရတာပါ တူနေပါတယ် ?
နို့ဘီလူး ဇာတ်ကား ဆုရသွားတဲ့ တတိယ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကတော့ Eurasia International Monthly Film Festival ဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့ website မှာ ‌ရေးထားပုံအရ သူလည်း အပေါ်က ၂ ခုလိုပဲ ဘာအဆင့်မှ မရှိပါဘူး ၊ မနေ့တစ်နေ့ကမှ ပေါ်လာပြီး တစ်လတစ်ခါ ပြိုင်ပွဲလုပ် ဆုတွေ ပေါပေါများများပေးကာ ပြိုင်ပွဲ ဝင်ကြေးယူပြီး လုပ်စားနေတဲ့ ဂျင်းပွဲတော်သာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ ဒီလောက်ညံ့တဲ့ ဇာတ်ကားက ဒီလောက်များတဲ့ ဆုတွေဘယ်လို ရခဲ့တယ်ဆိုတာ ရှင်းလောက်ပြီ ထင်ပါတယ် ။ Eurasia International Monthly Festival website မှာ တင်ထားတဲ့ သူတို့ရဲ့ ခမ်းနားလှတဲ့ ပွဲတော်ကြီး ကျင်းပနေပုံကို ခွီရအောင်လို့ ဓာတ်ပုံပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ???
ငါ့နှယ် နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ဆုရတယ်ဆိုလို့ လိုက်ရှာကြည့်တာ ၊ အဲ့လို လုပ်စားဂျင်းပွဲတော်တွေမှာ ဆုရတာကတော့ တိုင်းပြည်ဂုဏ်မတက်တဲ့ အပြင် မြန်မာပြည်ကို ကမ္ဘာပတ်ပြီး သောက်ရှက်လိုက်ခွဲနေတာနဲ့ပဲ တူပါလိမ့်မယ် ။ မြန်မာပြည်မှာ ဒီလိုဈေးကွက် ၊ ဒီဘတ်ဂျက် ၊ ဒီလို ဆင်ဆာ ဖြတ်ပုံနဲ့ ဒီလိုဂျင်းပွဲတွေမှာပဲ ပြိုင်လို့ ရမှာပေါ့လို့ ဆင်ခြေပေးလို့ မရပါဘူး ။
ခီမောင်နှံရိုက်တဲ့ Mudras Calling ရုပ်ရှင်ဟာ ကုန်ကျစရိတ် သိန်းရာဂဏန်းနဲ့ပဲ မြန်မာဈေးကွက်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး မြန်မာဆင်ဆာကိုပဲ ဖြတ်သန်းကာ ရိုက်ခဲ့ရတာပါ ။ အဲ့ဒီ Mudras Calling ဟာ တရုတ်ပြည်က Golden Rooster & Hundred Flowers Film Festival မှာ Best International Film အဖြစ် ၂၀၁၉ တုန်းက ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ် ။
အဲ့ဒီ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဟာ သက်တမ်း အနှစ် ၄၀ နီးပါးရှိပြီး တရုတ်ပြည်မှာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေထဲ တစ်ခု
လမ်းဘေးကနေ ကောက်ယူမွေးစားထားပြီး ကြီးလာမှ ဘာကောင်လဲဆိုတာ သိရ →